Raw Sunifiram powder (314728-85-3) Vaiti - Phcoker Chemical
Sunifiram (DM-235) poda ndeye rudzi rweanotropic. Icho chinhu chakasiyana-siyana chinobva piracetam neyekuyeuka, kudzidza, kufungidzika kwemaitiro ...
Unyanzvi: 1285kg / mwedzi
SKU: 314728-85-3 Category: Smart Drug
Raw Sunifiram powder (314728-85-3) video
Raw Sunifiram powder, inozivikanwawo seDM-235, inofambisa hutsva hutsva mukugadziriswa kunowedzera kuwedzera. Yakarongeka yakafanana ne racetam nootropics asi pamusoro pe1,000 nguva dzakasimba kudarika piracetam.
Raw Sunifiram powder inozivikanwa kushanda nekusimudzira basa re glutamate receptors uye nekuwedzera kubudiswa uye kusunungurwa kwe "learning neurotransmitter" acetylcholine.Itinofungidzirwa kuti Raw Sunifiram powder inonyanya kuita ndeyomu ampakine, zvinoreva kuti mushure mokuyambuka ropa-uropi hunopesana iyo inosungirirwa ku AMPA-gwiti glutamate receptors muuropi. Izvi zvinokurudzira kugadzirwa kwe glutamate, neurotransmitter inokosha inoita basa rinokosha mukushandura kweveural.
Glutamate inonzi neurotransmitter inofadza iyo inonyanya kuenderana nesapaplastic plasticity, kana kukwanisa kwehutano synapses kupindura kuwedzera kana kuderera mumabasa.Raw Sunifiram powder inofungidzirwa kuita sechilinergic, inowedzera kugadzirwa nekubudiswa kweurourotransmitter acetylcholine.
Raw Sunifiram powder (314728-85-3) Specifications
Product Name Raw Sunifiram powder
Kemikari Name DM-235,1- (4-benzoylpiperazin-1-yl) propan-1-one, Piperazine
muchiso Name Raw Sunifiram powder, DM-235
Kirasi yeMishonga Nootropics
Molecular Wsere 246.304 g / mol
Monoisotopic Mass 246.31
Kunyorera Point 98-100 ° C
Freezing Point Kwete deta yekuwanikwa
Biological Half-Life 4.5-6.5 maawa
Skukodzera Zvisingabatsiri, zvakasviba uye zvinoputika
Storage Temperature Chengeta pachitonho chemukati
APane Kuvandudza Mhemberero, Kuvandudza Kudzidza uye Kuderedza Maitiro Kushushikana, nezvimwewo.
mbishi Sunifiram powder (314728-85-3) Tsanangudzo
Sunifiram (DM-235) inonzi piperazine yakagadzirwa nemakakine-semishonga, inogadzirisa zvakafanana ne racetam nootropics asi inenge 1,000 nguva dzakasimba kudarika piracetam. Kunyatsotsvakurudza zvishoma kuripo ikozvino kwawanikwa, asi kuongorora kwemhuka kwekutanga kunoratidza kuti inogona kuva inobudirira zvikuru yeootropic pamwe nekugona kurapwa kwehutano hwakasiyana-siyana hwezvehutano hunosanganisira chirwere cheAlzheimer, chirwere chePalinson, uye amnesia.
Sunifiram yakatanga kugadziridzwa mu2000 nevasayendisiti paYunivhesiti yeFirencenze muItaly. Ongororo inoratidza kuti sunifiram powder inogona kusimbisa simba reropi, mafungiro, uye simba kunyange kana inotorwa zvakanyanya.
Sunifiram powder (314728-85-3) Mitiro weAtambo
Iyo nzira yekuita kwezuva sunifiram haisati yazivikanwa, asi inozivikanwa kushanda nekusimudzira basa re glutamate receptors uye nekuwedzera kubudiswa uye kusunungurwa kwe "learning neurotransmitter" acetylcholine.
Sunifiram inokurudzira glutamate receptor, NMDA. Inowedzera kukosha iyo glutamate (a neurotransmitter) inowanikwa pakati pemakumbo emagetsi europi. Izvi zvinogona kubatsira kudzorera mamiriro ekugadzirisa muhutano hwakakuvadzwa kana kuongororwa.
Sunifiram powder inowedzerawo kugadzirwa uye kusunungurwa kweeurotransmitter acetylcholine. Acetylcholine inonyatsobatanidzwa nehuwandu hwekucherechedza, kusanganisira kuyeuka, kudzidza nekukurumidza uye kukwanisa, uye huchenjeri hwemhepo kana kukwanisa kugadzirisa zvinetso zvakasiyana pasina kuvimba nemaitiro akadzidzira.
Benefits of Sunifiram powder (314728-85-3)
Kunobatsira Kudzidza nekuyeuka
May Kuvandudza Mafungiro, Kukurudzirwa, uye Mafungiro Akanaka
Mafungiro eMagetsi uye Simba Remhepo
Kuona uye Kuvandudza Kunzwisisa
Kuwedzera zvepabonde motokari
varumbidzwa Sunifiram powder (314728-85-3) Dosage
Kubva pakubatanidzwa kwemishumo yevashandi uye ruzivo rwakawanikwa kubva kuchidzidzo chezvipfuwo, muyero we5-10 mg wakatora kazhinji katatu pazuva ndeyekuti inofungidzirwa yose yakachengeteka uye inobudirira.Iyo inoshanda zvakanyanya apo dosed inonyorwa.
Zvikanganiso of Sunifiram powder (314728-85-3)
Kubva ikozvino, hapana kuonekwa kune dzakawanda migumisiro ye sunifiram powder kubva kutsvakurudzo kana maonero esayenzi.
Mushandisi-anonzi migumisiro yechirwere zvose zviduku uye zvenguva pfupi uye zvinosanganisira kuwedzera kwekushisa kwemuviri, kuwedzera kwepfupa uye salivation, musoro wepamusoro, kuisa muviri, kuwedzerwa kunzwisisika kuoneka uye kuchemedza inzwi, uye kusuruvara. Asi zvakakosha kuyeuka kuti hapana munhu anodzidza kana kuongororwa kwekliniki kwakaitwa.
Compound 7p powder yakagadzirwa seimwe mumakwikwi emakemikari ane chinangwa chekuziva maviri-kuita thromboxane .......
Unyanzvi: 1145kg / mwedzi
Raw Pikamilone sodium powder inosimudzira brain brain, inovandudza chiyeuchidzo, kufunganya, chinokurudzira, kutarira nguva, uye ......
Unyanzvi: 1530kg / mwedzi